Wararka - Maxay tahay sababta Kangyuan uu ugu xirayo maaskaro Laryngeal Airway ah?
Hawo mareenka Laryngeal mask (LMA) waa wax soo saar wax ku ool ah oo la soo saaray bartamihii 1980-meeyadii waxaana loo isticmaalay suuxdinta guud si loo dhiso hawo-mareen aamin ah. Hawo mareenka mareenka Laryngeal oo leh tayo wanaagsan wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan, sida si fudud loo isticmaalo, heerka guusha sare ee meeleynta, hawo lagu kalsoonaan karo, kicinta yar, ka fogaanshaha dhaawaca cunaha iyo xuubka dheecaanka. Laakiin sida loo kala saaro tayada LMA? Maanta, qaado marin-haweedka loo yaqaan 'Kangyuan mask laryngeal mask' oo leh saamiga suuqa sare tusaale ahaan si aad u sharaxdo sida loo xukumo tayada marin-haweedka maaskarada laryngeal ee saddexda dhinac ee hoose.
Marka hore: Maaddada Laryngeal Mask Airway
Tuubada ayaa laga soo saaray silikoon adag oo saafi ah oo lagu nadiifiyey platinum, waa darajo caafimaad oo leh hufnaan sare, isku xirnaan aad u fiican iyo xasilooni adag. Dusha sare waa mid siman oo huruud ah ma yeelan doono ka hor taariikhda uu dhacayo. Qalooca tuubada ayaa u dhiganta qaab dhismeedka jirka aadanaha.
Mashiinka waxaa lagu sameeyaa mashiinka wax lagu duubo oo la isku duro iyo mashiinka isku dhafka ah ee dareeraha ah ee silikoon saafi ah oo lagu nadiifiyo platinum, waxay leedahay xasillooni xoog leh, dusha jilicsan oo jilicsan, xiriir raaxo leh bukaanka.
Labaad: Nidaamka Wax Soo Saarka
Maaskarada lafaha loo yaqaan 'Kangyuan laryngeal' waxaa si madax banaan u soo saaray kooxda Kangyuan sanadkii 2005 waxaana la soo saaray wax soo saar ka dib baaritaan adag Waxay leedahay shatiyo dhowr ah waxayna leedahay faa iidooyin aan la barbardhigi karin marka loo eego maaskaro kale ee laryngeal. Nidaamka aasaasiga ahi waa sidan soo socota:
1) Isku-darka alaabta ceyriinka ah: iyadoo la adeegsanayo mashiinka isku-darka maaddada silikoon ee saxda ah si loo hubiyo xitaa isku-darka, oo loo isticmaalo chiller biyo-soo-noqnoqoshada si loo xakameeyo heerkulka qaboojinta.
2) Fidinta tuubada: Qalabka tooska ah ee saxda ah ee tooska ah oo leh cabbirka dhexroorka laser iyo shaqada goynta otomaatiga ah ayaa loo qaatay si loo hubiyo cabirka saxda ah iyo kan la xakamayn karo ee marin haweedka loo yaqaan 'Kangyuan laryngeal mask'.
3) Mashiinka wax lagu duubo ee loo yaqaan 'Cuff molding molding': iyadoo la adeegsanayo mashiinka wax lagu duubo ee dareeraha dareeraha ah ee si buuxda u shaqeeya gudaha, mashiinka isku dhafan ee firfircoon, tallaabada qalabka xakamaynta microcomputer.
4) Isku xirnaanta Cuff: Qalabka wax lagu shubo oo otomaatig ah ayaa loo isticmaalaa si loo hubiyo in xabagta si siman loo adeegsado.
5) Daabacida tuubada: Khadka qalajinta caafimaadka ayaa la isticmaalay, daabacadu waa mid aan sun lahayn oo ma dhacayso.
6) Ku xir tuubada iyo suufka iskuna xoq xabagta: ka dhig isku xidhka tuubada iyo kabuubku mid siman oo xad dhaaf ah, iyagoon soo bixin.
7) Isku soo duub calaamadda tilmaamaysa.
8) Baadhitaanka muuqaalka: LMA waa in lagu hubiyaa gacanta.
9) Ogaanshaha soo daadashada cabbirka: ku buufi kaabsulka 1.3 jeer baaritaanka biyaha si loo ogaado inuu daadanayo iyo in kale.
10) Nadiifi oo qalaji.
12) Nadiifinta xabadka ee loo yaqaan 'Ethylene oxide'.
Saddexaad: Noocyada hawo mareenka laryngeal
Habka saxda ah ee maaskarada lafaha qofka ee Kangyuan ayaa go'aamisa xirfaddiisa. Kadib 15 sano oo baabtiiska suuqa iyo roobab, Kangyuan wuxuu sumcad wanaagsan ku leeyahay suuqyada Yurub, Ameerika iyo Koonfur-bari Aasiya. Intaa waxaa sii dheer, Kangyuan wuxuu soo saaray dhowr shey oo maaskarada laryngeal ah oo leh saameyn kaladuwan noocyada bukaanada kala duwan, sida hal waddo marin hawo mareenka lafdhabarta caadiga ah, hal waddo oo la xoojiyo marinka marinka hawada ee maaskaro (tubada hawo qaadista waxay ku wareegi kartaa xaglo badan iyada oo aan la xoqin ama aan jeexanayn) , Hawo mareenka laryngeal ee leh baararka epiglottis (ka hortagga nooc kasta oo reflux ah), laba waddo oo la xoojiyay hawo mareenka laryngeal, hawo mareenka laryngeal PVC, iwm.